ANGLETERA:#BlameTheMuslims Tenifototra Tao amin’ny Twitter Nivaona Tamin’ny Tokony Ho Izy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2011 15:44 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Français, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Sanum Ghafoor, izay mandeha ao amin'ny Twitter amin'ny @Strange_Sanum, dia silamo 19 taona ary mpianatra ao Angletera. Tezitra amin'ny fanondroana avy hatrany ny Silamo ho tompon'antoka amin'ireo herisetra maro isan-karazany, indrindra fa ilay asa fampihorohorona tao Oslo tamin'ny herinandro lasa teo iny, nanao tora-po tamin'ny fibitsihana tamin'ilay tenifototra #blamethemuslims (an'ny silamo ny tsiny) i Sanum. Miaraka aminà tsindrom-paingotra sy sangy zary tenany, nandefa izao bitsika manaraka izao i Sanum :
@Strange_Sanum : Io indray isika…azarao amin'ny Silamo daholo izay zava-dratsy miseho eto amin'ity tany ity.
Mbola notohizany tamin'ny famoahana bitsika maromaro nampiasa ny tenifototra #blamethemuslims :
@Strange_Sanum : Tsy manana asa aho. #blamethemuslims
Nofinidin'ireo namany sy mpanaraka azy ilay tenifototra izay lasa nampiasain'ireo namany sy ireo mpanaraka hafa, nahatratra taham-pandraisana anjara avo dia avo izay nahatonga ilay lohahevitra nironana be tao Angletera, ary manerana izao tontolo izao tato aoriana. Satria efa zary mahazatra antsika ny mahita lohahevitra iray mipariaka lavitra be toy izany eny am-pototsofin'ireo mpihaino, mahagaga fa efa mivaona amin'izay zava-niseho ny fampiasàna azy, nitarika ho amin'ny fahasorenan'ireo mpampiasa Twitter tanteraka.
Nandefa hafatra fankahalàna ho an'i Sanum, eny fandrahonana ho faty mihitsy aza, ireo mpampiasa Twitter sasany, raha nandray am-po ilay tenifototra, ary nampakatra lahatsoratra miampanga ireo Silamo. Tsy voafehy intsony ny fifanakalozan-dresaka, nahatonga ilay lohahevitra ho malaza be, satria marobe ireo mpampiasa no mandefa ny eritreriny sy ny fahasorenan'izy ireo.
Tamin'ny bilaoginy, Clare Neruda dia nanoritsoritra ny esoeso momba ny tsy fahazoan'ireo olona ny tian'ny Sanum hahatongavana tany amboalohany:
Indrisy fa tahàka ny heverin'ny olona ho tena izy ireny. Nisy antso marobe ho an'ny Twitter ny amin'ny hanesorana ny TT (ary betsaka ny olona no gaga amin'ny famelàn'ny twitter an'io tenifototra io hivoaka kanefa ny tenifototra mahakasika an'i Justinbieber amin'ny #justinbieber dia nosakanana) ary maro ny matahotra ny mety hisian'ny voka-dratsin'izao zavatra izao. Na izany aza, ny ankamaroan'ireo olona nampiasa io tenifototra io dia toa nanao izany fotsiny hanohoana hatezerana noho izy io toa lohahevitra nanindrahindra fanavakavaham-bolonkoditra, ka tsy nanadihady ny fototra niaingany akory alohan'ny hanehoana hevitra. Eso miampy eso; ny zavatra izay tena noheverin'i Sanum hokianina tamin'ny fomba fandrabirabiana no vao mainka naverin'ireo olona an-tapitrisany maro izay diso tamin'ny ezaka nataon-dry zareo hamongorana ny ‘ratsy’ eo anivon'ny tontolo (twitter) izany dia tsy inona fa vokatry ny tsy fahazoana ny tian-kambara.
Ity misy fitanisàna avy amin'iny tafatafa nataon'i Nabeela Zahir tamin'i Sanum :
Sanum dia nanambara ny laza azon'ilay lohahevitra dia nanasongadina filàna misoko ny tokony hiresahana ny fomba fijery sy fandraisana ny Silamo, hatramin'ny fiakaran'ny lazan'ny elatra farany havanana manerana an'i Eoropa. Ny tatitra manodidina ilay asa fampihorohorona tao Oslo, dia anisany nampahazo vahana ny lohahevitra fanenjehana ny Silamo ho toy ny mpamono olona sy manaraka finoana mahery setra sy tsy mahay mandefitra.
“Taorian'ny 9/11 dia niova tanteraka ny fomba fijerin'ireo mpampahalala vaovao ireo Silamo, ary ny fomba fitatitra azy ireo. Lasa olana mahakasika ireo Silamo izany, tahaka ny olona tsy marary saina miezaka manamarina ny herisetra amin'ny alalan'ny resaka finoana. Dia nitohy foana izany nanomboka teo.”
Manantena i Sanum fa amin'ny alalan'ireo hanihany sy fanarabiana dia ho afaka maneho izy fa ny Silamo tsy hoe fampihorohoroana, tamin'ny fanehoana koa fa mba afaka mihanihany koa ny Silamo ary mino izy fa hanomboka hiala ao an-tsain'ny olona ny tsy fahatakarana ny Silamo.
Lasa fitaovana tena ilaina amin'ny fanapariaham-baovao ny Twitter. Nefa noho isika miresaka ny tokony hanamarinana ny vaovao, tokony ho tsaroana hatrany fa ny vanim-potoana nisiany, na koa ny tsy fahampiana avy amin'io antony io, dia mari-pamantarana iray hafa mora very. #blamethemuslims dia ohatra iray amin'ny vaovao mikoriana izay manomboka amin'ny fikendrena zava-tsoa, ary niafara amina vokatra tena mifanohitra amin'izay nandrasana
@Strange_Sanum : mihoatra ny lohako ity lohahevitra malaza be ity. manasogadina ny halehiben'ireo fiheveran-diso mahakasika ny fianakaviambe Silamo.
Tehirizo alefa io tenifototra io. kanefa na inona na inona ataonao, avadibadiho ny lela vao miteny hoe #blamethemuslims.